Zvigadzirwa Fekitera, Vatengesi - China Zvigadzirwa Vagadziri
Ground Yakagadziriswa PV Racking Systems yakagadzirirwa zvakanyanya kutengeserana yakakura uye yeruzhinji utility magetsi masisitimu. Mari yekushandira uye yekuisa nguva inogona kuderedzwa nekuda kwekutsigirwa kusati kwaungana.
Green Dzimba Dzokumusoro System (ecological solar solution) inoshandisa zvakakwana Nyika dzekurima uye inovandudza yakachena simba kubva kuzuva, ichiunza ramangwana rakachena kune vanhu.
Waterproofing Carport Solution yePV Solar Panels inogona kushandiswa sechiteshi chekubhadharira yakananga mota yemagetsi kamwe yakanyatso kubatana kune charging cabinet.
Kuenzaniswa neyekare carport, Iyo yakagadziridzwa yemukati chimiro pane FOEN yekudzivirira mvuraportport yepamusoro inoita kuti iite kutungamira, kuunganidza uye kubvisa mvura inonaya nemvura yekudzivirira system, inosvika pakubvumidza kudzivirira mvura uye kudzivirira iyo carport mukati. Mukuwedzera, iyo isina-inopinda yejoini remvura chute inogona kutakurwa uye kusunganidzwa kakawanda, zvobva zvadzora-pabasa basa zvakanyanya.
Tile Roof Solar Mounting System inogadzirirwa zvakanyanya kune ese ekugara nekutengeserana padenga remagetsi kuisa
FOEN's Aluminium kuvaka system, inopa yakakwira mhando Aluminium Solar Frame, unogona tsika pano pamakwikwi mutengo. Vimbiso yemhando!
3Sliding uye Casement Yakasanganiswa Window
Iyi anodized aluminium profiles inoshandiswa zvakanyanya kumawindo nemasuo. Zvakanakisa zvekuvakisa zvinhu. Iwe unogona kugadzirisa anodized aluminium profiles kubva kuFOEN pamutengo wakaderera peer.
Yedu yakarongedzwa aluminium extrusions zvigadzirwa zvinotengeswa pasi rese.Qourse kuvimbiswa!
Yakabatanidzwa kana yakamoneredzwa glazing ine optical zvivakwa iyo iri pachena kune mamwe mafafitidziro esimba uye anoratidzira kune vamwe. Chaiwo akapfeka zvinosarudzika akasarudzika kujekesa kujeka kunoonekwa uye anoratidza pfupi-wave uye refu-wave infrared radiation.
• Ruzha kurwisa Rw kusvika 48 dB
• Mhepo uye kudiridzwa kwemvura kusvika 1000 Pa (zvichienderana nekugadzirwa)
• Yakakwira yekudziya mafuta (zvinoenderana nekugadzirwa)
• Yakasarudzika glazing saizi kubva 6 kusvika 50 mm
• Girazi rakakwira zviyero kusvika ku500 kg
• Tarisa upamhi makumi matanhatu mm
• Yakasiyana chifukidziro micheka kunze
• Mukati uye kunze kweruvara sezvaunoda
FOEN Boka ikozvino rakakura bhizinesi rakakura, rinyanzvi mune yeChechi & Kugadzira, kugadzira pamwe nekutengesa kweAluminium chimiro, hwindo sisitimu, solar racking system, aluminium yekuvaka formwork, isina tsvina machubhu uye chidzitiro madziro madziro.Regarding kugadzira mitsara, Isu takaunza mune anopfuura makumi mashanu seti CNC kuumba equipments, Yedu pagore Kuumbwa kugadzira kugona kupfuura zviuru gumi nemashanu zvidimbu izvo zvinoita dhizaini nyowani nyore uye nekukurumidza.